Arụmọrụ arụmọrụ ike nke izizi 24/7 - Free-to Kenya Air Network | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » News » Ọrụ nke ike mbụ 24/7 - Free-to-Air Kenya Kids Network
Ọrụ nke ike mbụ 24/7 - Free-to-Air Kenya Kids Network
Mee 20, 2020 - networkmalite njikọta telivishọn abụghị maka nkụda obi, ọbụlagodi n'oge ọgba aghara akụ na ụba. Mana ibido otu n’oge nsogbu zuru ụwa ọnụ dị ka mbido na mba nwere ike ọkụ ugboro ugboro na-ewere ‘guts’ n’ọkwa ọzọ.
N'agbanyeghị nke ahụ, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Founders Jeff Schon na Jesse Soleil mere na New York City na Akili Network nke Nairobi. Oge mbu nke Kenya na 24/7, netwọta umuaka nkuzi nke ikuku na-ebido na Machị 31. Akmụaka Akili! na-agbasa ngbasa ozi nke umu aka ndi ulo akwukwo nke obodo na ndi ulo akwukwo.
Onye isi ala Schon na Soleil (Onye isi ala) si na US kwaga ebe obibi oge niile na Nairobi. Clọ ọrụ CTO, Vincent Grosso, na-eduzi ụzọ teknụzụ maka mbido site na New York na Manhattan.
A tụtara Akili ụmụaka dịka ọrụ zuru ụwa ọnụ site na mbido, yana ndị otu ahụ na-ekerịta mmemme na ọrụ aka ọrụ. Site na ntinye sitere n'ọtụtụ mba nke nwere ọtụtụ faịlụ vidiyo site na ọtụtụ oge mpaghara, ndị isi na Akili maara na usoro sistemụ ha kwesịrị ịdị na-agbanwe, ntụkwasị obi ma dị mfe iji ya na isi ụlọ maka okike. Na n'ihi akụrụngwa IP na Kenya, sistemụ ahụ nwere ike ịnagide ikike ọkụ ma nọgide na-anọrọ onwe ya na ntanetị ma ọ bụrụ na nkwanyerịta na sava ahụ mebiri.
N'iburu uzo uzo ndia, Akili hotara uzo plaodu Cloud2TV Cloud PlayTV site na PlayBox Neo. Cloud2TV bụ igwe-ọrụ nke igwe ojii-dị ka ọrụ ọrụ na-enyere ndị mgbasa ozi mgbasa ozi aka iji rụọ ọrụ cha cha ha site na ọnọdụ ọ bụla na ụwa site na ntanetị dị mfe iji.
Otu ihe na - ekpebi na mkpebi ahụ bụ ihe nlereanya SaaS na izi ezi nke ọrụ sava. Site na nkwado injinia dị mkpa maka ihe nkesa na Bulgaria (PlayBox Neo n'isi), Akili achọghị ndị ọrụ injinịa na saịtị na Nairobi. Ikpokoro dị na mpaghara data dị na Kenya nwere ikike ịrụ ọrụ zuru oke na ikike njikwa ikike nke enwere ike ijikwa ya site na desktọpụ ọfịs ọ bụla Akili ọ bụla.
Grosso kwuru na "Cloud2TV mere dịka ọrụ anyị dị ka ihe arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ site na mmalite ya." “Ebe data dị na Nairobi ebe sava Cloud2TV anyị dị, nwere ikike na mwepụta ntanetị, ọ nwere ike ịbụ isi 58 dị n'ụlọ ọrụ New York City. Iwu na njikwa ọrụ nke ikpo okwu PlayBox Neo na-eji obere bandwidụ ma dozie sava ahụ iji rụọ ọrụ onwe ha maka ụbọchị ma ọ bụ izu n'otu oge ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
"Ọ bụrụ na sava a na ngwanrọ ya nwere ike ịrụ ọrụ na Kenya, site na mpụga na ntanetị nke a na-apụghị ịtụkwasị obi, ọ ga-arụ ọrụ ọ bụla na US"
Van Duke, Onye isi US Operations, maka PlayBox Neo nwere njikọ chiri anya na mmezu a. Grosso gosipụtara iguzosi ike n'ezi ihe na nkà nkwukọrịta nke nhazi ngwaahịa na ihe nrụpụta nke ọma: “Mgbe ị nwere ngwaahịa na-arụ ọrụ nke ukwuu site na uche nke ndị injinia na-enwu gbaa, ị ga-achọ ụzọ idoghachi ndị ahịa azụkọ mkpa nke ndị ahịa ka ha nwee ike imepe ya. ọrụ dị mkpa. Van tinyere ndị Akili na ndị injin PlayBox Neo ịchọta ụzọ kacha mfe iji sọftụ wee rụọ ọrụ ọdụ dị mkpa ngwa ngwa. ”
Ndị otu Akili Network na-eji Slack, Zoom na Skype na-ekwurịta okwu ụwa niile na ntabi anya dịka otu egwuregwu mebere. A kọwapụtara ọrụ Akili Network nke ọma. Izu ole na ole tupu agbasa ozi agbasa, Soleil na-abanye na sava ọdịnaya New York iji transcode faịlụ site na ndị na-eweta ọdịnaya. Beforebọchị tupu ọdịnaya ahụ aga ikuku, onye njikwa nhazi na Nairobi, Anne Sato, dechara ndepụta ọkpụkpọ maka izu na-abịa. N'elekere iri nke etiti ọwụwa anyanwụ, abalị na-aga tupu ụbọchị mgbasa ozi ọ bụla, Grosso na-abanye na sava PlayBox iji lelee ndepụta egwu echi otu oge ikpeazụ tupu ikuku.
Anyanwụ anaghị ada na Akili. Mgbe ndị otu nọ na Kenya nọ na-ehi ụra, anyị na-arụ ọrụ na US na ndị ọzọ, "Grosso na-akọ. "Apụrụ m ịhụ nke a dịka ọmụmaatụ maka otu mgbasa ozi mebere saiti na mpaghara dị iche iche na mpaghara US"
Schon na Soleil nwere otuto mgbasa ozi, agụmakwụkwọ na teknụzụ buru ibu, gụnyere Onye isi oche nke teknụzụ Nkụzi na Scholastic na EVP, Onye isi nchịkwa ụwa nke Digital maka Porter Novelli n'otu n'otu. N'iburu ụdị aha ụdị aha a na US, ha nwere ike ị dọta ọdịnaya dị elu maka Akili Kids!
Schon kwuru, sị, "Maka ọdịnaya Akili Network, ebumnuche anyị bụ ka anyị nwee pasenti 40 nke mmemme ya bụ ndị na-emepụta Kenya ga-eme n'ime ọnwa iri atọ na isii na-abịanụ." Ebe ihe dị ka ụmụaka 36 nde ụmụaka Kenya na-agụghị akwụkwọ, oge kwesịrị iji mee ka ha nweta usoro izi ihe kacha mma.
Ihe kacha ọhụrụ site Pipeline Communications (-ahụ ihe niile)
Ebe a na-eme nri KitchenFish na FOR-A Video Switcher maka mkpuchi a pụrụ ịdabere na mgbasa ozi lọtrị kwa ụbọchị - May 27, 2020
Netiwube TVU na - esonye na Nweta Inye Nkwado Ndụ Nke kacha nke Mmepe Ihe Nkwalite Azụmaahịa Mere Akụkọ site n’aka US Space Agency. - May 20, 2020
Ọrụ nke ike mbụ 24/7 - Free-to-Air Kenya Kids Network - May 20, 2020
Previous: Spotify tụgharịrị gaa DPA iji dekọọ ndepụta egwu 'Spotify Singles'
Osote: Netiwube TVU na - esonye na Nweta Inye Nkwado Ndụ Nke kacha nke Mmepe Ihe Nkwalite Azụmaahịa Mere Akụkọ site n’aka US Space Agency.